Hargaysa International Book Fair Sideebay Aqoonsiga Somaliland Qayb Laxaadle ugu Qaadan kartaa
Monday July 26, 2021 - 09:26:38 in Articles by Hadhwanaag News
Magacase ku Haboon muxuu Yahay
Sannad kaste waxa la qabtaa bandhig buggaageed loogu magac daray hargaisa internationa book fair taasi oo lagu qabto meelo Kala duwan ee dhulka soomaalida. Haba ugu weynaato xarunta dhaqanka ee saldhigeedu Yahay Isla hargaysa..
Bandhigyadan oo heer caalamiya ayaa Sannad kaste qaban qaabadeeda la guda galaa waxana yimaada wufuud heer caalami ah kuwaa oo ka soo kala boqoola dunida dacaladeeda.
Dad badan oo qorayaal ahna waxa ay u tahay dhiiri galin weyn si ay hibadooda ugu soo ban-dhigaan dadkana ugu hor keenaan waxay tacab galiyeen.
Hore waxaan u ogayn wixii la odhan jiray maktabada guurta oo kolba magaalo u guuri jirtay taa oo kasoo hayaami jirtay arlada yurub hoggaankana u hayn jiray mikana u hayo iIsla aqoonyahan jaamac muuse jaamac taa oo ahayd mid baraarujin yo kobcin maaneed si loo koriyo maskaxda dadka hibooyinka leh looguna dhiiri galin jiray ahmiyada akhriska.
Had iyo jeer hargaysa international book fair waxa ay kor u qaadaa magaca magaalada hargaysa aniguna tallo ahaan waxa aan ku soo jeedin lahaa in lagu badalo Somaliland international book fair Tani waxa ay ka Qayb ka Qaadan kartaa aqoonsigeena